Yini izinhlangano ingabe unaso elithi "olwandle"? Ngokuqinisekile nobusuku obubandayo ebusika noma okungamukeleki nokuwa dank kumemori udlala ebhishi libalele kakhulu, efudumele, efana esigubuzele, amanzi usawoti, barnacles, ulwandle amatshe, amatshe. Guess?
I cishe am ngokwanele nje iqembu elincane. Ngiyakuthanda bazulazule iminyaka lwasebusika, i oluyimpuphu kancane, kwaleli chibi. A kwekwindla, lapho amaqabunga emithi cishe wandizela phezu, futhi ilanga likhanya ukukhanya ekhethekile aphuzi, ngikwazi ukuchitha amahora endaweni cafe ogwini, ukulalela ukukhala seagull futhi ejabulela imisindo atishaye iphuma waya ogwini amagagasi.
ulwandle Russian - ezahlukene kakhulu. Singasho lucky, t. Ukuze. Kungenzeka ukuba uthole lokho element ukuthi uzohlangana isimo zethu zangaphakathi. Singashumayela ogwini nokhahlo wezilwandle enyakatho, futhi ehlobo saba njalo thokozani ogwini Black Sea.
Isigaba 1. Russian Sea. incazelo jikelele
Ngokwenkolelo ethandwayo, ogwini yezwe ubizwa wageza ngu ezilwandle nambili. Kungani mina wasebenzisa igama elithi "evamile"? Ikhona yini yimuphi umbono ngalolu daba? Yebo, kukhona. Ngezinye izikhathi ulwazi kungatholakala izincwadi empeleni iziLwandle 13. thina ngeke okukulesi sihloko ukuze cabanga iCaspian Sea, okuthiwa 'yolwandle', kodwa ngokwesimo sawo kakhulu ichibi elikhulu kunawo wonke emhlabeni.
Sea eRussia akunakubangelwa ngqo izilwandle ezintathu:
Atlantic - ezintathu: Azov, aseBaltic, Black;
-Arctic - eziyisithupha: i uBarents, Mhlophe, Kara, Laptev, East eSiberia futhi amaChukchi;
laba yingxenye yolwandle iPacific - ezintathu: iBering, Okhotsk, Japan.
Isigaba 2. Russian Sea. izici isici
Asikwazi ngiziqhayise abanye, Ngingathi, izici zayo eziyingqayizivele ekujuleni kwethu:
Izindawo Okhotsk, iBering futhi uBarents iziLwandle kukhona ukuyedlula Emhlabeni, futhi umkhiqizo sogu lolwandle yethu West eKamchatka esifundeni ufinyelela kulelo zinga emhlabeni.
Ngo amanzi ezilwandle zaseMpumalanga Ekude has izinqolobane omkhulu zinhlobo kwezentengiselwano izinhlanzi nezinye izilwane zasolwandle ukuthi anencazelo global. Ngokwesibonelo, lapho ukuphila Pollock, inkosi crab kanye salmon Pacific.
Uma siqhathanisa, isibonelo, nge eNyakatho ye-Atlantic, amasheya cod-Pacific futhi yethu Arctic ezilwandle okuningi.
Sea Russian aqukethe eliphakeme kunawo wonke emhlabeni ezihlukahlukene salmon Sturgeon.
Into ebaluleke kakhulu kufuduka imigwaqo ezincelisayo zasolwandle nezinyoni abahlala Nenkabazwe, ulidlulisele ngokusebenzisa ogwini Russian zezilwandle.
Isigaba 3. Russian Sea. Lemvelo futhi indlela aphume isimo
Okwamanje, abantu benza izenzo ezibonisa kuthinta isici lwamanzi, ngokubukisa okukhulu kwalesi umthelela angabhekwa ezimbi. Emashumini eminyaka ambalwa edlule, ikakhulukazi olwandle eningizimu yeRussia wahlupheka (Black futhi Azov). Ngaphansi kwethonya isici anthropological washintsha cishe ngokuphelele semvelo endawo esifundeni.
Phakathi kwezici ezinkulu usongo, ngingathanda uqaphele lokhu okulandelayo:
Ngenxa obhejane ngokungemthetho zokudoba kahle ngokomthetho imithombo yemvelo wezilwandle sanciphisa kangcono.
Ngenxa sezimoto, kanye ukukhiqizwa uwoyela negesi esebenzayo sogu lolwandle akuyona kuphela nokungcoliswa izindlela zokuphakelwa kwamanzi, kodwa futhi kuphazamisa izinqubo zemvelo nezemvelo.
Into embi kakhulu ukuthi kwenzeka ngesikhathi esifanayo nokungcoliswa egeleza emifuleni ulwandle.
Ososayensi basikisela izindlela eziningana kulesi simo:
Kuyadingeka ukuba cishe ngokuphelele futhi ngokuphelele wokuguqula embonini yokudoba yezwe. Ukudoba akufanele deplete izinsiza zasemanzini isimo.
Ufuna ukwakha inethiwekhi lonke ezindaweni ulwandle evikelwe. Ngokwesibonelo, amapaki kanye reserves noma izinqolobane.
Ngaphambi kokuqala noma imuphi umsebenzi okhishiwe ku igesi noma uwoyela, kubalulekile ukuqhuba ukuhlolwa olunzulu kwezemvelo sezwe kanye nesimo imisebenzi kuhlelwe.
Umphakathi kokuLima: umqondo kanye izici eziyinhloko
Ngubani Maksut Shadayev? amaphrojekthi eqaphelekayo ungqongqoshe abasha
Indzaba-agumenti "Doctor - umsebenzi wami ikusasa"
I-US, enezikweletu ezinkulu, ungalahlekelwa ukulinganisa
Izimpesheni eziphezulu Koblevo "Tatiana", "Riviera", "Ethembeni", "Willow"